Sheekh C/qaadir Sh. C/raxmaan Celi oo mahad celin iyo baaq u diray jaaliyadaha Soomaalida dibadda | Maanta Online
Home / Islam / Sheekh C/qaadir Sh. C/raxmaan Celi oo mahad celin iyo baaq u diray jaaliyadaha Soomaalida dibadda
Sheekh C/qaadir Sh. C/raxmaan Celi oo mahad celin iyo baaq u diray jaaliyadaha Soomaalida dibadda
Posted by: admin in Islam, Wararka March 31, 2015	Comments Off on Sheekh C/qaadir Sh. C/raxmaan Celi oo mahad celin iyo baaq u diray jaaliyadaha Soomaalida dibadda 601 Views
“Waxaan halkaan uga mahad celinayaa dhammaanba jaaliyadaha Soomaalida dalka dibadiisa degan taakuleynta dayactirka mowlicii Sheekh C/raxmaan Celi oo lagu faafiyo diinta Islaamka” ayuu yiri Sheekh C/qaadir Sh. C/raxmaan oo sheegay in mowlacaasi uu dhisan yahay in ka badan 40-sano.
Previous: Dacwad ooge kiis Al-Shabaab hayay oo Kampala lagu toogtay
Next: Kooxo hubeysan oo xalay magaalada Baydhaba ku dilay Nabadoon caan ah iyo xaaskiisa